Daawo: Sawirada Hotel aan Saqaf iyo Gidaar laheyn misana Noqday midka ugu …. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Dhacdooyinka » Daawo: Sawirada Hotel aan Saqaf iyo Gidaar laheyn misana Noqday midka ugu ….
Daawo: Sawirada Hotel aan Saqaf iyo Gidaar laheyn misana Noqday midka ugu ….
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 20-07-16 3:13 PM Waa Hotel kii ugu horeeyey nuuciisa oo kale kaas oo laga hergeliyey dunidan aynu ku noolnahay, Hotelkan ayaa inta badan loo dalxiis tagaa xilliyada Xagaa oo ah xilli aad u kulul marka loo eego wadamadaha dhaca qaarada duqda ah ee Yurub.
Hotelkan ayaa laga furay buuraha ku yaalo Graubünden ee dalka Switzerland waxaana habeenkii lagu seexanayaa qolalka labada sariir leh aduun lacageed oo gaarayo 154 oo ginni una dhiganta 200 lacagta isticmaalo dalka Switzerland.
Hotelkan oo uu nuuciisa yahay mid qariib ah (La yaab ) ayaa noqonayo mid kamid waxyaabaha galaya buuga lagu qoro dhacdooyinka caalamka ka yaabiyo.
Qolalka Hotelkan oo aan saqaf iyo Darbi midna ayaa usoo jiidi karra dadka dagayo qabow daran balse Milkiilaha Hotelkan la yaabka leh ayaa gaashaanka u daruuray wararkaas isaga oo sheegay inuu u diyaariyey dadka dagaya Hotelkiisa ay heli doonaan Go’ (Maro ama Dhar) ka difaacaya qabow ga iyo Cunno kulul.
Halkan hoose ka daawo Sawirada Hotelka Cajiibka Badan.